Dowlada Norway oo soo bandhigtay hindise sharciyeed cusub oo ku saabsan qaabka kala noqoshada dhalashada Norway - NorSom News
Dowlada Norway oo soo bandhigtay hindise sharciyeed cusub oo ku saabsan qaabka kala noqoshada dhalashada Norway
Baarlamaanka Norway ayaa sanadkii hore meelmariyay hindise sharciyeed awooda kala noqoshada sharciga dhalashada Norway ka qaadaya hey´adda agaasinka soo galootiga ee UDI-da. Iyada oo loo wareejiyay maxkamada Norway, kadib aqlabiyada baarlamaanka oo arintaas isku raacay.
Baarlamaanka ayaa xukuumada ay gar wadeenka ka tahay Erna Solberg ka codsaday inay soo diyaariyaan soo jeedin ku saabsan qaabka isbadal loogu sameyn karo xeerka soo galootiga Norway, si loo meelmariyo hindise sharciyeedka cusub.
Xukuumada ayaa waqti dheer kadib maanta oo isniin ah soo bandhigtay soo jeedin cusub oo ku jaan go´an soo jeedintii baarlamaanka, waxeyna baarlamaanka ka codsadeen inay meelmariyaan. Wax ka badalista soo jeedintan ayaa loo qabtay mudo ku eg´17-ka bisha Desember ee sanadkan.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee soo jeedintan ku xusan ayaa waxaa kamid ah in qofka eedeysan ee dowladu ay rabto inay kala noqoto sharciga uu heli doono qareen bilaash ah oo ay dowladu lacagtiisa bixineyso.
Sidoo kale caruurta ayaa lasoo jeediyay inaysan saameyn ku yeelan, hadii uu yimaado go´aan in waalidkood laga qaado dhalashada Norway. Waxaana soo jeedinta xukuumada ku xusan in ilmaha aan looc iqaabin danbiga waalidkiis, xoogana la saaro waxa ilmaha u fiican.
Soo jeedintan ayaa sidoo kale lagu xusay in la sharciyeeyo in qofka aan laga ceshan dhalashada Norway, hadii ay dhibaato aan la xadidi karin oo la xiriirta qofka ama xubnaha kale ee qoyskiisa.
Mahad Abiib kiiskiisa:
Waxaa xusid mudan in go´aanka baarlamaanka ee arintan ku saabsan kala noqoshada sharciga dhalashada, ay aheyd mid toos ah uga dhalatay kiiska Mahadi abiib oo kiiskiisu uu hada gacanta ugu jiro maxkamada racfaanka Norway.
Xigasho/kilde: Halkan kasii akhri soo jeedinta xukuumada ee arintan
Previous articleDhageyso: Ilhaan Cumar oo qarka u saaran inay taariikh cusub ka dhigto siyaasada Mareykanka
Next articleKRF: Waxaan ugu yaraan rabnaa sadex wasaaradood
Keydka NorSom Velg måned juli 2020 (9) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (78) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)